September 2016 – Arakan Times
A teenage girl raped in Maung Daw north
September 27, 2016	Leaveacomment 720 Views
AT Correspondent, Maung Daw A Rohingya 10 years old girl was raped by Hlun Thein force of Kuanciban of Maung Daw north on September 25, 2016 at around 4.30 pm inahut while she was taking rice for her father who was fishing atafish lagoon. The victim was identified as daughter of Abul Malek,afisherman ...
“အခွင့်အရေးဆိုတာ အလိုလို မရတတ်ပါဘူး”
September 26, 2016	Leaveacomment 288 Views
“လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ အလိုလို ရတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တောင်းယူရတယ်၊ တောင်းယူလို့ မရရင် တိုက်ယူရတယ်၊ အသေခံရတယ်၊ နောက်မှ ချိုမြိန်တဲ့ “လူ့အခွင့်အရေး” ရလာတာပါ။” ဒီနေ့ ကမ္ဘာကနေ ကျွန်စနစ် ပပျောက်သွားတာ တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီကျွန်စနစ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း သေကုန်တဲ့ ပုဂ္ဂိလ်တွေ အများကြီးပါ။ နောက်မှ ရလဒ်ထွက်လာတာပါ။ ထိုနည်းတူပဲ ကိုလိုနီစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတာကနေ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကြီုးစားရင်း၊ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင်တွေလည်း သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အများကြီးပါ။ နောက်မှ ရလဒ် ထွက်လာတော့တာ၊ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရလာခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ လူများစုက လူနည်းစုကို ဖိနှိပ်တာ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တာ ရှိနေတာပဲ၊ အနည်းနဲ့ အများဘဲ ကွာခြားတာ၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာန်ုင်ငံလိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူး။ ဆိုလိုတာက ...
Deadly clashes continued between Myanmar Army and Kachin Forces
September 26, 2016	Leaveacomment 434 Views
By Wai Mar Tun and Win Zaw Ko Arakan Times: Fighting between Myanmar forces and Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State has intensified over the past few days, forcing some 2,000 people to flee rural villages for larger towns, according toaKachin leader. “Clashes have escalated to the level of heavy weapons recently, with no more small arms ...
September 26, 2016	Leaveacomment 998 Views
AT Online Report With India looking to completely seal the Indo-Bangla border in Assam soon,atop Bangladeshi security commander has said his country has decided to erectabarbed wire fence along the border with India and Myanmar. Director General of Border Guard Bangladesh (BGB), Bangladesh’s border guarding force, Major General Aziz Ahmed toldavisiting group of ...
World Muslim leader urges Myanmar Suu Kyi to protect minority
September 26, 2016	Leaveacomment 690 Views
AT Online Report Myanmar State Counselor and Foreign Affair minister, Aung San Suu Kyi met Iyad bin Amin Madani, the secretary general of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), in New York on September 21, according to the Ministry of Foreign Affairs. They discussed Suu Kyi led NLD democratic government reforms and continual ethnic conflict in the State where the ...
Readout the Ministerial-level Meeting of the Secretary-General’s Partnership Group on Myanmar
September 26, 2016	Leaveacomment 295 Views
Posted by: Aye Min Arakan Times: The Secretary-General convened todayameeting of his Partnership Group on Myanmar at the Ministerial level. At the meeting, he briefed members on his visit to Myanmar in late August and shared his observations on the major changes taking place in that country, reflecting the commitment of its new leadership to strengthening the rule ...
Seven Myanmar migrants nabbed in Songkhla
AT Online Report Border patrol police and administrative officials early yesterday morning rounded up seven undocumented Myanmar migrants atapara-rubber plantation in Songkhla’s Sadao district. The migrants were temporarily staying there pendingalabor agent transporting them to Malaysia, authorities said. At around 1 am yesterday, officials led by Sadao district clerk Napol Pahumanto arrested the migrants at ...
Food aids stopped, Rohingya suffer in Aung Minglar Quarter
September 25, 2016	Leaveacomment 627 Views
AT Correspondent, Sittwe Rohingya residents have been facing various crises including food in Aung Minglar Quarter which is the only place remains less hurt during the anti-Muslim violence erupted in 2012 in Arakan State. It is learnt that the food aids provided by the WFP has been stopped for about four months due to pressure from Government side while ...
Myanmar allows 143 former citizens to recommence residency
September 24, 2016	Leaveacomment 440 Views
AT Online Report Myanmar’s former government introducedapermanent residence system for overseas nationals taking foreign citizenship to return and stay back in Myanmar permanently to enable them to do their businesses. Recently Myanmar government has allowed 143 former citizens taking foreign citizenship to resume their citizenship in accordance with law, authorities said on Saturday. Minister of Labour, Immigration ...
IMPORTANT NEWS အောင်မင်္ဂလာမှာ ရိက္ခာပြတ်လတ်နေပါပြီ
စစ်တွေ(23.9.2016) ARAKAN TIMES *ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သည် တစ်ခုတည်းသောအထီးကျန်ဘဝ ခြောက်သွေးနေဘဝနှင့်အစာရေစာပြတ်လတ်ခံနေရသည်မှာ2012 ခုနှစ်မှစ၍ယနေ့ဆိုရင်လေးနှစ်ကျော်နေဖြစ်နေပြီကိုတကမ္ဘ္ဘာလုံးသိနှင့်ပြီထင်ပါသည်။ * လေးနှစ်ကျော်ကျော်ပိတ်မိနေသော ဆက်လက်ပိတ်မိနေဆဲအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သည် ရခိုင်ပြည်အစိုးရနှင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံမှ မည်သည့်ရိက္ခာအကူမရခဲ့သည့်အပြင် အ မျိုးမျိုးသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများခံနေရဆဲဖြစ်ပြီး အစာရေစာပြတ်လတ်မှုဒဏ်ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလူထုများ အစုအပြုံ လိုက်သေစေနိူင်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ Action Plane Genocide တစ်မျိုးစတင်ခံနေရပါပြီ။ * ပြည်မရှိစေတနာရှင်အလှူရှင်တစ်ချို့ မှ အောင်မင်္ဂလာနေရိုဟင်ဂျာပြည်သူများအတွက်လှူဒါန်းထားသောရိက္ခာသည်လည်း ပြတ်လတ်နေသည်မှာ နှစ်ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။လူဦးရေလေးထောင်နီးပါးသာကျန်ရှိနေသော ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့်သေတွင်းထဲကိုရောက်နေရပြီး ရခိုင်ပြည်အစိုးရ၏ Big Plane များအောင်မြင်ဖို့အလားလာနီးလာပြီဟု ဒေသချစ် သောဒေသခံတစ်ဦးမှ ARAKAN TIMES သို့ အောက်ပါပုံနှင့်တကွ သတင်းပေးပို့ထားပါသည်။ သတင်း။ ။BRAVO LATIF ( A.R.N.I.S ) RO BRAVO Hla Report .